Breaking News..ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်မှာ ဖြစ်သွားတာပါ။ – XB Media Myanmar
မနေ့က ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်မှာ ဖြစ်သွားတာပါ။ အခုတော့ ကမာရွက် ရဲစခန်းမှာ အက္ခရာတူ/ကားတူ ဘယ်ကားမှန်/ ဘယ်ကားမှား ဆိုတာဖြေးရှင်းနေရပါပြီ။စုံစမ်းကြည့်တော့ စိတ်မကောင်းစရာတွေနဲ့ ရောထွေးနေလို့ ချပြ မရေးတော့ပါဘူး….အမျိုးတို့ရေ…
ကားဝယ်သည်ဖြစ်စေ/ ရောင်းသည်ဖြစ်စေ Date တစ်ခု Booking လုပ်ပြီး ယာဉ်စစ်ကြပါဗျား။ယုံကြည်မှုတခုတည်းနဲ့ ပုံအောမိလို့ကတော့ မိတ်ဆွေအစစ်ကနေ ရန်သူအဆင့်ထိ အလိုအလျှောက် ဖြစ်သွားနိူင်ပါတယ်။အရိုးခံဘဝတွေ နောင်တ တရားနဲ့ ဘဝပျက်မတတ် မခံစားရအောင် ချင့်ချိန်နိူင်ကြပါစေ။
😢(လူလူချင်း လှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ)😢အားလုံးကို ရိုသေလေးစားလျက် တနိုင်တပိုင် ဘဘ ဘလှိုင် (သာကေတ၊တပ်ဖွဲ့)၁၄. ၃. ၂၀၁၉ Photo….Crd….. Ba Hlaing
မနကေ့ ရနျကုနျမွို့လယျခေါငျမှာ ဖွဈသှားတာပါ။ အခုတော့ ကမာရှကျ ရဲစခနျးမှာ အက်ခရာတူ/ကားတူ ဘယျကားမှနျ/ ဘယျကားမှား ဆိုတာဖွေးရှငျးနရေပါပွီ။စုံစမျးကွညျ့တော့ စိတျမကောငျးစရာတှနေဲ့ ရောထှေးနလေို့ ခပြွ မရေးတော့ပါဘူး….အမြိုးတို့ရေ…
ကားဝယျသညျဖွဈစေ/ ရောငျးသညျဖွဈစေ Date တဈခု Booking လုပျပွီး ယာဉျစဈကွပါဗြား။ယုံကွညျမှုတခုတညျးနဲ့ ပုံအောမိလို့ကတော့ မိတျဆှအေစဈကနေ ရနျသူအဆငျ့ထိ အလိုအလြှောကျ ဖွဈသှားနိူငျပါတယျ။အရိုးခံဘဝတှေ နောငျတ တရားနဲ့ ဘဝပကျြမတတျ မခံစားရအောငျ ခငျြ့ခြိနျနိူငျကွပါစေ။
😢(လူလူခငျြး လှညျ့ပတျခွငျး ကငျးဝေးကွပါစေ)😢အားလုံးကို ရိုသလေေးစားလကျြ တနိုငျတပိုငျ ဘဘ ဘလှိုငျ (သာကတေ၊တပျဖှဲ့)၁၄. ၃. ၂၀၁၉ Photo….Crd….. Ba Hlaing